RPA - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
Qalabaynta Robotic Automation
otomatiga hawlaha ku salaysan xeerka iyada oo la adeegsanayo xalalka softiweer ee casriga ah ee yareeya ku tiirsanaanta aadanaha ee shaqada caadiga ah. Adigoo kaashanaya RPA, waxaad ku maareyn kartaa keydka macluumaadka ee ku jira arjiyada (, ERPs, Nidaamyada Taageerada Macmiilka, iwm.) Adigoon la socon kormeer joogto ah. Iyada oo la xoojinayo garaadka macmalka ah, kuwani waxay wax ka baran karaan jawaabaha hadda jira naftoodana way hagaajin karaan. At NewGenApps waxaan abuurnay madal otomaatig ah oo aan ku xallin karin oo keliya xallinta otomaatiga laakiin sidoo kale leh aaladaha chatbot ee caqliga leh. Teknolojiyada karti u leh RPA iyo AI waxay u abuurayaan fursado waaweyn kobaca ganacsiga waxayna abuuraan qiyam iyo fursado cusub. Ganacsatadu waxay aad u danaynayaan inay sahamiyaan kartida xalalka AI ee hal -abuurka leh oo ay gartaan faa'iidooyinkooda.
Sababta RPA Saxnaanta
Marka si habboon loo qorsheeyo, softiweerradani waxay meesha ka saaraysaa fursadaha qaladka aadanaha ee hawlgallada iyagoo si caqli leh u hagaajinaya waxqabadkooda ku saleysan jawaabaha la helay. Sababtoo ah feejignaanta aan xadidnayn iyo xisaabinta nacasnimada ah, waxay u abuuraan faa'ido istiraatiiji ah oo weyn ganacsiyada.
Yaree Kharashka Hawlaha Ganacsiga
Kharashaadka ku baxa howlaha ganacsiga si aad ah ayaa loo dhimay maaddaama hal software uu awood u leeyahay inuu maareeyo shaqada shaqaale badan. Tani waxay badbaadineysaa waqtiga shaqaalaha howlaha adag. Waxa kale oo jira kharash yar oo ku baxay shaqaalaynta iyo joogtaynta shaqaalaha.
Dabacsanaanta Xoogga Shaqaalaha
Uma baahnid inaad shaqaalaysiiso shaqaale cusub mar kasta oo xogtu soo baxdo. Robots / Softwares oo loogu talagalay hawlaha noocaas ah waxay xamili karaan dhammaan noocyada kor iyo hoos xogta. Xaqiiqda ah inaad adeegsan karto softiweer otomaatig ah 24*7 iyo 365 maalmood sanadkii, waa faa iido weyn.
Dhimista Kharashka Tababarka iyo Horumarinta
Uma baahnid inaad tababaro shaqaale cusub si ay barnaamijyadaada uga soo wataan meel hoose. Shaqaalaha waxaa la bari karaa wax ka qabashada ka reebista iyo howlaha falanqaynta badan. Marka, koritaanka shaqaalahaaga wuxuu diirada saarayaa feker heer sare ah marka loo eego qabashada shaqada xanaaqa.
Adigoo maskaxda ku haya ujeeddooyinkan ganacsi, NewGenApps waxay soo saartay madal Automation oo jiil cusub ah si ay uga caawiso meheradaha inay tan gaaraan. Waxaan ka caawinnay Ganacsatadu inay yareeyaan qiimaha hawlgallada in ka badan 40% oo aan kor u qaadno qiimaha ganacsiga iyada oo loo marayo Kharash-kaydinta, Kordhinta wax-soo-saarka, Yaraynta waqtiyada soo-noqoshada, Kordhinta hufnaanta hawsha iwm. Iyada oo leh koox u heellan horumariyayaal khibrad leh, waxaan awood u leenahay in aan ka faa'iideysano tikniyoolajiyadda casriga ah si aan kuu gaarsiino natiijooyinka ugu wanaagsan. Qalabkeena Qalabaynta wuxuu leeyahay awood uu ku bixiyo -
1. Awood-siinta ku-saleysan ku-tiirsanaanta qaanuunka (RPA)
2. Sirdoonka Artificial -ka ah iyo barashada Mashiinka ayaa xalliyay xalka.
3. Intellibot: Madal Chatbot ah oo lagu abuurayo sheekado fudud daqiiqado gudahood.